साप्ताहिक राशिफल (वि.सं. २०७४ श्रावण २९ गतेदेखि वि.सं. २०७४ भाद्र ०३ गतेसम्म) – Complete Nepali News Portal
साप्ताहिक राशिफल (वि.सं. २०७४ श्रावण २९ गतेदेखि वि.सं. २०७४ भाद्र ०३ गतेसम्म)
August 13, 2017	1,872 Views
आगामी ७ दिनभित्रका चाडपर्व र उत्सव तथा शुभ मूहुर्त ः–
भोलिको मूहुर्त ः रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, दैलो राख्ने,
३० गते ः श्रीकृष्णजन्माष्टमी व्रत, अष्टमी व्रत, मोहरात्री, मन्वादि,
३१ गते ः गोरखकाली पूजा, श्रीकृष्ण यात्रा, हिलेजात्रा (रामेछाप, चिसापानी), भगवती यात्रा (पाल्पा, तानसेन), नारायणी यात्रा, मष्टजाँत (सिलगढी, डोटी), विभिन्न कृष्णमन्दिरहरूमा राधाकृष्ण रथयात्रा, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), कलशचक्र,
३२ गते ः गुँगा नवमी, भीम यात्रा (ललितपुर), बनारसी मेला समाप्त (बैतडी, गुजर), कलशचक्र,
०१ गते ः भाद्र सङ्क्रान्ति, वल्के पर्व, अन्नप्राशन(पास्नी), अग्निवास(होमादि), शिलान्यास (सामान्य), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, घर छाउने÷ढलान गर्ने, डेरा सर्ने, दैलो राख्ने, कलशचक्र,
०२ गते ः अजा एकादशी व्रत, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), कलशचक्र,
०३ गते ः शनि प्रदोष व्रत, जुग यँ पञ्चदान (नेवारी पर्व), त्रिपुष्कर योग बिहान ०५।५७ बजेसम्म, रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, कलशचक्र,
यो साता तपाईंको राशिबाट दोस्रो, तेस्रो र चौथो घरमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्नेछ, त्यसैले उत्साहवर्द्धक समय छ । कतै रमाइलो यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोजनको प्राप्ति हुनेछ । व्यवसाय र पेसाबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, चिताएभन्दा बढी कमाउने योग छ । समय राम्रो छ । मङ्गलबारपछि सामाजिक काममा संलग्न हुनुपर्ला । धार्मिक वा सामाजिक सेवाका काममा प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । दाजुभाइ वा नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । समय मध्यम खालको छ । बिहीबारपछि विदेश वा प्रवासमा बसेर कामधन्दा र व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो लाभ प्राप्त गर्नसक्छन् । तर घरमा बस्नेले अनावश्यक दौडधुप गर्नु पर्नेछ । काममा किसिमकिसिमका चुनौती देखा पर्नेछन् । नयाँ काममा हात हाल्नु श्रेयस्कर हुँदैन । साताको अन्त्यमा बौद्धिक, साहित्यिक र सिर्जनात्मक क्षेत्रमा समययापन हुनेछ । धनलाभ हुने सङ्केत छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ । समाजसेवा गर्दा प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । नयाँ योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।